Ivenkile Esemthethweni, Ivenkile Yentengiso
Ivenkile Esemthethweni, Ivenkile Yentengiso Umqondo woyilo wevenkile usekwe kumava eSantiago Bernabeu, egxile kumava okuthenga kunye nokudala umbono. Ngumbono wokuba kwangaxeshanye ohlonipha iklabhu, uncome kwaye ungafezekisi iklabhu, uthi impumelelo ibisiphumo seetalente, umzamo, umzabalazo, ukuzinikela kunye nokuzimisela. Le projekthi ibandakanya uyilo lweKhonkco kunye noMiliselo lwezoRhwebo, ukuRhweba, ukuPakisha, umGangatho weGrafti kunye noYilo lwefanitshala yeShishini.
Ikhonkco Qadem Hooks sisixhobo sobugcisa esinomsebenzi weconsole ophefumlelwe yindalo. Idityaniswe neefolokhwe ezindala ezipeyintiweyo ezindala eziluhlaza, ezazisetyenziswa kunye neQadem (isitali somthi esidala somthi) sokuhambisa ingqolowa ukusuka kwenye ilali ukuya kwenye. Iintshukumo zixhonywe kwibhodi yakudala ye Wheat Thresher, njengesiseko kwaye igqityiwe iphaneli yeglasi ngaphezulu.
Isikhongozeli Nesinongo I-Ajorí sisisombululo sokuyila ukulungiselela nokugcina iincasa ezahlukeneyo, iziqholo kunye nezinto ezikhuthazayo, ukwanelisa nokulungelelanisa izithethe ezahlukeneyo zecala ngalinye. Uyilo lwayo lobuhle obuhonjisiweyo luyenza ibe sisiqwenga somfanekiso, esiphumela njengesihombo esibonakalayo ukubonisa njengesiqalo sengxoxo esingqonge itafile. Uyilo lwepakeji luphefumlelwe ulusu lwegalikhi, lube sisicelo sobunye sokupakishwa kwe-eco. I-Ajorí luyilo olucocekileyo lobunganga beplanethi, ephefumlelwe yindalo kwaye yenziwe ngokupheleleyo kwizinto zendalo.
Ubucwebe Obuyimbalasane Ubuhle obucacileyo, obucacileyo, obuchongiweyo, obuyilwe ngaphandle kwesidingo sokusebenzisa izinto ezilahliweyo ezivela kwimveliso kaClaire de Lune Chandelier. Lo mgca uphuhle ukuba inani eliqokelelweyo lezinto eziqokelelweyo- onke amabali abalisayo, onke amele ukubonwa kukukhanya kobulumko bomyili. Ukunyaniseka kuyinxalenye ebalulekileyo yabayili bobugcisa, kwaye oku kubonakaliswa kukhetho lwe-acrylic esetyenzisiweyo. Ngaphandle kwesibuko i-acrylic ezisetyenzisiweyo, ezibonakalisa ngokwazo ukukhanya, izinto ezibonakalayo zihlala zibonisa, imibala okanye icacile. Ukupakishwa kweCD kuqinisa iikhonsepthi zokuphindaphinda.
Ikhonkco Ikhonkco ekhethekileyo eyenziwe ngeenkuni ezipeyintiweyo ngamatye okugqiba, ibonisa i-grinder yekofu eyiyo eyinyani ebuyela emva kwixesha lwe-ottoman. Ikofu yaseJordania epholileyo (iMabrada) iphinde yaqokelelwa kwaye yaqengqeleka ukuba ime njengenye yemilenze kwelinye icala lekhonkco apho kuhlala khona igreyidi, isenza isiqwenga somdlalo wefoyer okanye igumbi lokuhlala.
Umsesane Amatye obuhle obuthandekayo - ipirope-eyona nto ibaluleke ngayo izisa ubungangamsha kunye nokuqaqamba. Obo bubuhle kunye nobunye beli litye lichongwe kulo mfanekiso, elungiselelwe ukuba lihonjiswe kwixesha elizayo. Kwakukho isidingo sokwenza isakhelo esikhethekileyo samatye, esiya kumthwalela emoyeni. Eli litye lakhutshelwa ngaphaya kwentsimbi yalo. Le fomati inkanuko yothando kunye namandla anomdla. Kwakubalulekile ukugcina ingqondo yeklasikhi, ukuxhasa ukuqonda kwembali yeziyolo.
Ivenkile Esemthethweni, Ivenkile Yentengiso Ikhonkco Isikhongozeli Nesinongo Ubucwebe Obuyimbalasane Ikhonkco Umsesane